Sida loo dhigo waxyaabaha joogtada u ah Google Home desktop-ka miiska taleefankaaga | Androidsis
Kaaliyaha Google wuxuu la socday howlaha ilaa laba sano, muddo kadib waxay ku fiicnaanayeen kuna shaqeynayeen qalab kasta. Ka-faa'iideystayaasha shaqadan ayaa ah kuwa ku hadla Google Home iyo Google Nest, kala duwanaanta ilaalinaysa heerka iibka sare ee wanaagsan tan iyo markii la bilaabay.
Codsiga Guriga Google wuxuu helay horumarin dhowr ah bishii Nofeembar, hagaajinta laba shay, kontaroolada dib-u-socodka iyo howlaha joogtada ah. Qodobkan ugu dambeeya ayaa la bilaabi karaa, tusaale ahaan ku hadla Google Nest Hub oo aan ahayn aaladdayada, mid ka mid ah waxyaabaha ay isticmaaleyaashu aad u isticmaaleen.
Mid ka mid ah horumarkii ugu dambeeyay ee barnaamijka Guriga Google wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku celino howlaha joogtada ah ee guriga taleefankeena si aad tan dhakhso ugu bilowdid. Tan waxaa sii dheer bixinta xawaaraha micnaheedu waa inaannaan xitaa u baahnayn inaan marinno, adigoo gujinaya guji fudud si aad u bilowdo shaqaynta.
Abuuritaanka marinka kumbuyuutarka waxaa sharxaya Google, laakiin waxaa ugu fiican in la sameeyo iyada oo aan loo baahnayn inaad aragto casharrada markaad furto:
Soo gal arjiga Google Home
Hada kafiiri qeybta Jadwalka joogtada ah ee kuyaala bogga Hoyga
Soo hel jadwalka caadiga ah ee aad maalin kasta sameyso si aad ugu dhejiso desktop-ka qalabkaaga
Xagga sare waxaad ku arki doontaa fallaadh tilmaameysa shaashad, riix kuna xaqiiji si otomaatig ah u dar
Waxa kale oo aad ku samayn kartaa adiga oo ku jiidaya desktop-ka, in kasta oo ikhtiyaarka ugu horeeyaa uu yahay kan ugu dhaqsaha badan isla markaana aanad ku qaadan riix
Hadda mar talaabadani la sameeyo, waxay ku tusi doontaa ogaysiinta shaashadda, markaa waxaad yeelan doontaa in Google Home Jadwalka had iyo jeer la arki karo oo la heli karo. Guriga Google wuxuu noo oggolaan doonaa in aan barroosinka dhigno wax ka badan hal shay, sidaa darteed haddii aad rabto waxaad si dhakhso leh ugu gudbin kartaa mid kale desktop-ka.
Jadwalka joogtada ahi waa muhiim, gaar ahaan haddii aad rabto in uu kugu wargeliyo qofka hadlayaWaxyaabaha muhiimka ah waxaa ka mid ah inaan kuu sheego subax wanaagsan, tani waxay ku dhacdaa iyadoo lagu daro ficillo la taaban karo. Jadwalka joogtada ahi wuxuu shaqeeyaa markaad joogto guriga iyo markaad maqantahay, uma baahnid inaad halkaas joogtid sidoo kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo dhigo waxyaabaha joogtada u ah Google Home desktop-ka taleefankaaga
Sida loo beddelo meesha uu ku yaal kumbuyuutarka WhatsApp
Qabille oo istiraatiijiyad biomedical run ah oo leh Biyo Inc furashada